Haddii aad la isticmaalayo mobile HTC iyo haatan doonayso inaad ugu bedesho Blackberry, mid ka mid ah, dhibaatooyinkii laga yaabo in wajiga aad ugu weyn waxaa xogta laga telefoonka jir wareejinta in ka mid cusub. In kasta oo aan waxba waa wax aan macquul aheyn in Zaman farsamo mar walba sii koraya ee maanta, dhowr caqabado oo aad la kulmi kartaa halka macluumaadka wareejinta ka HTC in BlackBerry ka mid noqon kara:
Part1: ka HTC beddelashada Data si fudud Blackberry
Kala beddelashada wareejinta xogta ka HTC in BlackBerry waa hab laba tallaabo ah meesha aad ayaa looga baahan yahay in:
Tallaabada Koowaad dhoofinta xogta ka phone HTC si aad u computer.
Tallaabada Laba Import xogta ka PC in aad telefoon cusub BlackBerry.
Part2: Soo Bandhigida Wondershare MobileGo
Wondershare MobileGo waa barnaamij ka mid-stop-dukaan la isticmaalayo, taas oo aad si fudud u dhoofin karto xogta aad ka phone HTC si aad u computer. Barnaamijku waa bilaash u ah madal Windows oo si fudud loo soo bixi karaa website-ka rasmiga ah.
Waxa intaa dheer in warbixinta ka soo baxday telefoonka gudbaayo computer ama ka mid phone in kale, qaababka kale ee Wondershare dalabyo MobileGo ka mid ah:
Gurmad Data (gurmad hal-click).
Keenista ama dhoofinta xogta la isticmaalayo Outlook.
Keenista ama dhoofinta xogta la isticmaalayo Live Mail.
Badalidda audio iyo video files hor wareejiyo.
Si ka duwan hababka kale / barnaamijyadooda in aad u baahan tahay si ay u geliyaan xogta aad ay server ama ay ku tiirsan yihiin barnaamijyada aan degganayn, Wondershare MobileGo kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan waxyaabaha phone oo dhan si aad PC ka dibna ka PC in qalab kale oo kasta. Mararka qaarkood waxa kale oo aad ku wareejin karaa xogta aad ka mid phone in kale si toos ah oo aan la isticmaalayo qalab kasta oo dhex-dhexaadin, sida kombiyuutar.
Tallaabada 01: ka HTC beddelashada Data si aad u computer
Degsado iyo ku rakibidda Wondershare MobileGo on Your PC
1. Log on si aad u computer Windows oo isticmaalaya xisaab maamulka.
2. Hubi in PC waxaa ku xiran internetka.
3. Fur browser web oo aad doorato wax oo taga si ay http://mobilego.wondershare.com/ link.
4. Laga soo bilaabo bogga internetka furay, riix Download Free Win8 / Win7 / Vista / XP u button iyo soo bixi MobileGo in aad PC meel si sahlan loo heli.
5. Ka dib markii download u dhameystiray, double-riix file ka soo dejisan.
6. ee Control Account User sanduuqa xaqiijin, guji Haa in aad bixiso ogolaashahaaga in ay sii wadaan la rakibo.
7. On the screen firirka dabamariyay kor, riix rakib button.
8. Sug ilaa Wondershare MobileGo uu ku rakiban aad kombuutarka si guul leh.
Bilaabanaya MobileGo Wondershare iyo xiridda Phone HTC ah
1. Ka dib markii la rakibey dhameystiray, riix Start Hadda button ka screen firirka in si toos ah ay u muuqataa ah.
2. Tan iyo waa mobile HTC in aad ku talajirto in ay u gudbiyaan xogta ka, ka furmo suuqa soo socda oo u muuqata ka, riix Android button.
3. Marka interface soo socda u muuqataa, xiriiriyaan smartphone HTC in PC isticmaalaya cable xogta in geeyey oo ay la socdaan telefoonka ah.
4. Sug ilaa MobileGo si toos ah uu ku rakiban aad casriga ah.
5. aad casriga ah HTC, aqbasho wax fariimaha xaqiijin muuqda shaashadda si ay u oggolaadaan kombiyuutarka si ay u eegaan qalabka aad dhab ah.
6. soo bandhigay Qalabka xusuustay sanduuqa gujisid, riix OK in ay oggolaadaan in aad computer in la xasuusto telefoonka HTC ku xiran mustaqbalka. (Sidaas samayso saartaa in ee sugida buuga ka mid ah qalabka marka marka xigta waxaa ku xiran in kombuutarka.)
Dhoofinta Xiriirada Isticmaalka Windows Live Mail
1. Laga soo furay Wondershare MobileGo interface, riix Transfer Phone doorasho.
Fiiro gaar ah: Waxaad la xiro karo sanduuqa gujisid in ay u muuqataa sida aad u guurto interface soo socda kasta.
2. interface soo socda, hoos Essentials qaybta, riix dhoofinta Noolaado Mail doorasho.
3. sanduuqa xaqiijin bandhigay, riix OK si loo xaqiijiyo hanaanka xiriir nuqul Mail Live.
4. Sug ilaa ay wada xiriir telefoonka waa in loo dhoofiyo Live Mail, iyo mar ay yihiin, riix OK dhoofinta guul sanduuqa.
Tallaabada 02: Keenista Xogta laga Computer si ay BlackBerry
Si ay u dajiyaan xogta ka PC in aad casriga Blackberry, waa in aad isticmaasho BlackBerry Desktop Software (guud ahaan lagu yaqaan in ay dadka sida Manager BlackBerry Desktop). Waxaad nuqul ka mid ah BlackBerry Desktop Software ka heli kartaa adigoo raacaya link hoos ku qoran:
Degsado iyo ku rakibidda BlackBerry Desktop Software on PC
2. Fur web browser kasta oo taga si http://us.blackberry.com/software/desktop.html.
3. Laga bilaabo bogga internetka furay, hoos Users Wixii PC qaybta, riix Download button PC for.
Fiiro gaar ah: Haddii aad isticmaalayso computer Mac, waa in aad riix Download Mac u button hoos Users Wixii Mac qaybta ka page isla
4. Bogga xiga web oo u muuqata, guji si loo xusho No button radio ka qaybta sare.
5. Laga soo bilaabo qaybta hoose, guji Download iyo soo bixi codsiga aad kombuutarka meel si sahlan loo heli.
6. Sug ilaa habka download dhameystiray, iyo mar ay qabato, double-riix file ka soo dejisan.
7. On the Control Account User sanduuqa xaqiijin, guji Haa in aad bixiso ogolaashahaaga in ay sii wadaan.
8. Raac tilmaamaha ku-screen halkaas ka si ay u isticmaalaan rakibi BlackBerry Desktop Software aad Windows PC.
Bilaabanaya BlackBerry Desktop Software iyo Keenista Xiriirada inay casriga Blackberry ah
1. Ka dib markii la rakibey codsiga dhameystiray, double-guji toobiye icon ka furmo suuqa desktop-ka.
2. Laga soo furay Welcome to BlackBerry Desktop Software sanduuqa pop-up, calaamadi sanduuqa checkboxes la doonayo sida aad door bidayso, iyo riix Hel bilaabay button.
3. Isticmaalka cable xogta USB ah in la geeyey oo ay la socdaan telefoonka mobile Blackberry, xirmaan taleefanka si aad u computer Windows.
4. Sug ilaa Desktop BlackBerry ee Software ogaadaa telefoonka smart.
5. Marka aad telefoon la ogaado, riix Abaabulaha TICMAALKA ka Murayaad bidix ee furay BlackBerry Desktop Software interface.
6. Laga bilaabo Murayaad saxda ah hoos Settings .Wadashaqayntaas qaybta, riix reserved goobaha button.
7. Laga soo Device Select codsiga sanduuqa soo baxa soo socda, ka fiiri Kitaabka Cinwaanka checkbox.
8. Ka sanduuqa ku xiga in booda, dooranayaan ku habboon sida ka jeeclaadeen oo guji OK.
9. Back ku Select Device codsiga sanduuqa, guji midkood Setup ama Advanced button badan qaabeynta granular, il khariidaynta, iyo / ama hal ama laba-jid .Wadashaqayntaas.
10. Marka sameeyo, dib BlackBerry Desktop Software interface ugu weyn, riix nidaameed utton aad u bilowdo nidaamka .Wadashaqayntaas ah.
MobileGo Wondershare lala BlackBerry Desktop Software shaqaysaa si fiican marka ay timaado guuray HTC (ama wax smartphone kale Android) si BlackBerry ama qeybsanaan. Inkastoo nidaamka u muuqan kartaa muddo dheer in bilowga, waa mid ka mid ah hababka ugu fudud si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya labada ayaa sheegay in qalabka la yaraan dusha iyo gabi ahaanba dhibaatana ma leh.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in BlackBerry?